Ceebtii ka dhalatay xil wareejin la'aantii Kheyre oo ku soo baxday Ra'iisul Wasaare Rooble(Dhagax-dhig yaab leh!). - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ceebtii ka dhalatay xil wareejin la’aantii Kheyre oo ku soo baxday Ra’iisul Wasaare Rooble(Dhagax-dhig yaab leh!).
Breaking NewsFaaqidaadSomali NewsWarbixin
Ceebtii ka dhalatay xil wareejin la'aantii Kheyre oo ku soo baxday Ra'iisul Wasaare Rooble(Dhagax-dhig yaab leh!).
Ra’isalwasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay 15-ka October, 2020 dhagax dhigay Xarunta Gurmad Qaran, Isla xaruntan waxaa sanad ka hor 13-kii October, 2019 dhagax dhigay Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo aan xilka ku wareejin Rooble.
Xarunta Qaran ee Gurmadka waxaa ay baahideeda soo baxday kadib Qaraxii Zoobe iyadoo leh taariikh dheer, maanta oo Ra’iisul wasaaraha mar kale dhagax dhigay waxay muujinaysaa in Ra’iisul Wasaare Rooble ka warqabin waxqabadkii xukuumaddii ka horeysay maadaama aanu xilka kala wareegin Ra’iisul wasaarihii ka horeeyey.
Ka dib dhagax dhigga shalay, wuxuu Ra’iisul wasaare Rooble yiri, ” Anagoo ka jawaabeyno meelihii aan tagnay daraad iyo shalay sida wasaaradda caafimaadka xarumaheeda isbitaallada De Martini & Banaadir, iyo munaasaddii xuska 3-aad ee qaraxii Zobe ayaa waxaa noosoo baxday inaan sameyno Xarunta Qaran ee Hawlgallada Gurmadka Degdegga oo ka hortagta iskuna diyaarisa masiibooyinka intii aysan dhicin si ay ugu jawaabto”.
Aragtida shacabka ee arinkaan ayaa muujineysa in khudbadaan Ra’iisul wasaaraha ka muuqato in la marin habaabiyey Ra’iisul Wasaare Rooble markii uu sheegay in baahida dhismaha xaruntan ay soo baxday markii uu booqday Isbitaallada Banaadir, Yardimeli & Martini 11-ka Bishaan, 2020, maalma ka hor dhagax dhiggii maanta.
Xarunta uu ra’iisul Wasaaraha shalay dhagax dhigay ayaa ah ah Ex-Dugsigii Sare ee Banaadir uu ka guuray Isbitaalkii Deva. Kheyre ayaa wareegto uu soo saaray horay ugu dalbaday in Xarunta Gurmad qaran laga dhigo Ex-dugsiga sare ee Banaadir.
Waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in wasiirka Gargaarka Xamze oo Xasan Cali Kheyre sanad ka hor la dhagaxdhigay Xaruntan oo haddana markale la dhagax dhigaya isla xarunta Ra’iisulwasaare Rooble.
Warbixin kooban oo dib loogu eegayo mashruuxa Dhismaha Xarunta Gurmadka Qaran ayaa lagu sheegay arrimahan soo socda:
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa bartamihii September, 2019 shir uu la yeeshay xubno ka socda Dowladda Sweden iyo hay’adda UNFPA waxa uu ku qanciyey in ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ka taageeraan dhismaha Xarunta Qaran ee Gurmadka Degdegga ah (XQGD).
Muddo bil ah ka dib, 13-kii Oktoober, 2019, ayuu Ra’iisul wasaare Kheyre dhagax dhigay xarumo dhawr ah oo ay ka mid yihiin Bangiga Dhiigga iyo Xarunta Qaranka ee Gurmadka Degdegga ah, waxaana markaasi xaruntani loo qorsheeyey in laga dhiso Xarunta Hargaha iyo Saamaha oo ay degan tahay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka, halka Bankiga dhigga laga dhigay Isbitaalka Banaadir.
Waxaa la go’aamiyey in Dhismaha Xarunta Gurmadka Qaran laga wareejiyo Xarunta Hargaha iyo Saamaha, loona wareejiyo Dugsigii Sare ee Banaadir oo markaas uu ka guuray Isbitaalkii Deva. 19-ka Janaayo, 2020 ayuu wareegto uu Ra’iisul Wasaare Khayre soo saaray (XRW/019/01/2020), ku faray in Guddiga Qaran ee Gurmadka Degdegga ah lagu wareejiyo Isbitaalka Deva (Ex Dugsi Sare Banaadir) si looga dhiso Xarunta Gurmadka Degdegga ah. Warqaddaan ayaa mas’uuliyiintii loo diray fuliyeen 26-kii Janaayo, waxaana isbitaalka si rasmi ah loogu wareejiyey guddiga Gurmadka degdegga ah.
Wixii markaas ka danbeeyey waxaa dhismaha xarunta taageero dhaqaale oo gaaraya 2 Milyan Doollar looga helay dalka Sweden. Guddiga Qaran ee Gurmadka degdegga ayaa ku jiray dhismaha xaruntaan oo shirkaddii dhisi laheyd Qandaraaska siisay, isla markaana waxaa socday hawsha dhismaha inta uu dhicin Cudurka COVID19 oo hakad geliyey shaqada.
Hirgelinta Xaruntaan ayaa aheyd qorshe dadweynaha Soomaaliyeed la socdeen, waxayna ka mid aheyd tallooyinkii dowladda loo soo jeediyey ka dib qaraxii dadka badan ku hoobteen ee Oktoober, 14, 2017.
Waxay dad badan la yaabeen in maanta 15-ka Oktoober, 2020 uu Ra’iisul Wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble oo aan weli magacaabin wasiiradiisa uu la dhagax dhigo markale wasiir xukuumaddii hore ka tirsan oo isla wasiirka xaruntaan uu Xarunta la dhagax dhigay madaxdiisa hore, taasoo cadeyn u ah in Ra’iisul wassaaraha wax xil ah lagu wareejin, kana war hayn shaqooyinka la soo qabtay iyo kuwa hadda socda, ama ay jirto sabab kale oo sharciga lagu baalmarayo ama hawlaha dowladda lagu hakad gelinayo halkii laga sii wadi lahaa meeshii ay joogeen…….
Ceebaha ka dhashay xil wareejin la’aanta iyo ka warqabid la’aanta waxqabadka Xukuumaddii hore ayey tani billow u tahay.
Waxyaabaha Isweydiinta mudan waxaa ka mid ah xitaa haddii Ra’isalwasaare Rooble helin waxqabadka Xukuumaddii ka horreysay maxaa ku dhacay Wasiirkii labada dhagax dhig marqaatiga ka ahaa?
Ma sii socon doonaan Khaladaadka Rooble ee xog ogaal la’aanta ah?
Aqriste, maxay kula tahay adiga.
Fariintaada noogu reeb comment-ga.
Warar iyo Faallooyin Xaqiiqda ku saleysan
Wadanninimo, Qarannimo & Soomaalinimo
Ceebtii ka dhalatay xil wareejin la'aantii Kheyre oo ku soo baxday Ra'iisul Wasaare Rooble(Dhagax-dhig yaab leh!). Kheyre ee Rooble
Shir uu ka qeybgalay Fahad Yaasiin oo ka dhacay Muqdisho